ग्लाेबल हेल्थ Archives - HealthyKhabar
स्वरकी धनी गायिका लता मंगेशकर अस्पताल भर्ना,अवस्था गम्भीर
नयाँदिल्ली । स्वरकी धनी भारतीय गायिका लता मंगेशकरलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। छातीमा इन्फेक्सन भएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन्। लता मंगेशकरको अवस्था गम्भीर बनेको र अस्पतालमा उपचार चलिरहेको समाचार एजेन्सी पिटीआइलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ। भारत रतन र दादा साहब फाल्के जस्ता सम्मानबाट सम्मानित लता मंगेशकर भारतीय सिनेमा जगतकी सर्वश्रेष्ठ गायिका हुन्। बलिउडकी चर्चित गायिका लतालाई स्वास फेर्न समस्या भएपछि मुम्बइको ब्रिज क्यान्डी अस्पताल पुर्‍याइएको हो। लता गत सेप्टेम्बर २८ मा ९० वर्षकी भइन्।
यी हुन संसारकी सबैभन्दा सेक्सी नर्स (फोटो फिचर सहित)
एजेन्सी । क्यारिना लिन पेशाले नर्स हुन् । ताइवानस्थित मिन शेङ जनरल अस्पतालमा कार्यरत उनी पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट भाइरल भएकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा इन्स्टाग्राममा आफ्ना ग्लामर फोटो पोष्ट गर्न थालेपछि उनी भाइरल भएकी हुन् । इन्टरनेट सञ्जालमा क्यारिनालाई संसारकै हट नर्स भन्न थालिएको छ । अहिले उनको इन्स्टामा लाखौँ फलोअर्स छन् । उनले आफ्ना यस्ता तस्बिर पोष्ट गर्नुको कारण भाइरल हुनका लागि नभई आफ्नो खुशीका लागि भएको बताउने गरेकी छन् । ‘म साधारण मान्छे हुँ । म भाइरल हुनका लागि तस्बिर खिचाउँदिन तर मनको आनन्दको लागि तस्बिर खिचाउने गरेकी छु ,’ उनले यो पनि भनेकी छन् । ‘म मेरो नर्सिङ पेशालाई अत्यन्तै सम्मान गर्छु र त्यसमा गम्भीर छु तर ड्युटी अफ भएको बेलामा नर्सले मोडलिङ गर्न पाइदैन भनेर कहाँ लेखेको छ र ?’ त्यसैले म यस्ती छु । हेरौं तस्विर
डाक्टरले जलाएर मारिन् श्रीमानकी प्रेमिका र उनका ६ वर्षका छोरा
भारत। एक महिला चिकित्सकले श्रीमानकी प्रेमिका र उनका ६ वर्षीया छोरालाई ज्युँदै जलाएर हत्या गरेकी छन् । भारत राजस्थानकी सीमा गुप्ता नामकी ती चिकित्सकले श्रीमानकी प्रेमिका बस्ने राजस्थानको भरतपुरस्थित पौश कोलोनीमा रहेको घरभित्र आगो लगाएर बाहिरबाट ढोका बन्द गरिदिएर हत्या गरेकी हुन् । घटनामा आमा र बालक दुवैको तत्काल जलेर मृत्यु भएको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार उनका पति पनि पेशाले चिकित्सक नै हुन् । उनीहरुको एउटा क्लिनक छ । क्लिनकको रिसेप्सनमा काम गर्ने २५ वर्षीया दीपा गुर्जर नामकी युवतीसँग आफ्ना पति डा. सुदीप गुप्ताकोे ‘अफेयर’ चलेको थाहा पाएपछि डा. सीमाले ती युवतीलाई जागिरबाट हटाइदिइन् । तर, उनका श्रीमान र ती महिला प्रेममा लिप्त भइसकेका थिए । उनीहरु त्यसपछि पनि टाढिन सकेनन् । लुकेर भेटघाट गर्दै रहे । यतिसम्मकी डा. सुदीपले युवतीका लागि छुट्टै घरसमेत किनिदिए । सोही घरमा आफ्नी सासुलाई समेत लिएर गएकी डा. सीमा र युवतीबीच केहीबेर भनाभन भयो । भनाभनपछि उनी बाहिर निस्किइन् र साथमा लगेको…
स्वास्थ्य सचिब डा. पुष्पाको राजिनामा, अब विश्व स्वास्थ्य संगठनमा जागिरे
काठमाडौँ, ४ कात्तिक । स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीले विश्व स्वास्थ्य संगठनमा जागिर खानको लागि राजीनामा दिनुभएको छ। आइतबारदेखि लागू हुने गरी सचिब चौधरीले पदबाट राजिनामा दिइसक्नुभएको छ। चौधरीको राजिनामा स्वीकृत भने भएको छैन । उहाँको राजिनामा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । सचिव पदमा अझै तीन बर्ष पदावधी छँदा छँदै उहाले राजिनामा दिनुभएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डव्लुएचओ)को ‘कन्ट्रि अफिस’ भारतमा गई काम गर्नका लागि सचिब चौधरीले राजिनामा दिनुभएको हो। उहाँ गत असारमै डव्लुएचओको भारतस्थित ‘कन्ट्रि अफिस’को लागि पी फाइव (सहसचिव तह) लेभलको पोष्टमा छनौट हुनुभएको छ।
अस्पतालमा आगलागीः आठ नवजात शिशुको निधन
अल्जियर्स, ७ असोज । अल्जेरियाको पूर्वी भागमा मङ्गलबार बिहान सबेरै एक अस्पतालको प्रसूति इकाइतर्फ भएको आगलागीमा परी आठ नवजात शिशुको मृत्यु भएको आकस्मिक सेवाले जनाएको छ । राजधानी अल्जियर्सबाट करिब ५ सय किलोमिटर टाढा रहेको ओयुड सोउफमा रहेको यस अस्पतालमा स्थानीय समयानुसार बिहान ३ः५० बजे सो आगलागी भएको जनाइएको छ । अस्पतालबाट ११ नवजात शिशु, १ सय ७ महिला र २८ जना कर्मचारीको उद्धार गरिएको आकस्मिक सेवाका प्रवक्ता नसिम बेनाओवीले एएफपी समाचार समितिलाई बताउनु भएको छ । दुर्भाग्यबस आठ शिशुको भने मृत्यु भएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ । रासस/एएफपी
संविधान दिवसमा प्रधानमन्त्री ओलीकी निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह देखी विदेशी डाक्टरलाई समेत पदवी
काठमाडौं, ३ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह शाहले सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री पदक पाउने भएकी छिन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको उपचार भइरहेको सिंगापुरको युनिभर्सिटी अस्पतालका मिर्गाैला रोग विभागका चिकित्सक प्रोफेसर अनन्थरमण वात्सलालाई पनि सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री पदक दिइँदै छ । त्यस्तै, भारतको एमएक्स ग्रुप अफ हस्पिटलका युरोलोजी विभागका अध्यक्ष प्राफेसर डाक्टर अनन्तकुमार, भारतकै इन्स्टिच्यूट अफ एडल्ट रिकन्सट्रक्सन, स्पोर्टस् इन्जुरी एण्ड ज्वाइन्ट रिप्लेसमेन्टका अध्यक्ष डा. राजिवकुमार शर्मा र भारतकै इन्द्रप्रस्थ एपोलो अस्पतालका क्यान्सर विभाग प्रमुख डा. हरिस दुवालाई पनि सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री पदक दिने तय भएको छ । राष्ट्रपतिले दिने मानपदवी अन्तर्गत सुकीर्तिमय राष्ट्रदिप दित्तीय श्रेणीको पदकबाट ख्यातीप्राप्त चिकित्सक प्रा.डा भगवान कोइरालालाई सम्मान गरिँदैछ । सुप्रबल जनसेवा श्री तृत्तीय श्रेणीबाट गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका निवर्तमान निर्देशक डा. ज्योतेन्द्र शर्मा, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. उत्तमकुमार शर्मा, सोही अस्पतालका डा. ईश्वर लोहनी, ग्राण्डी अस्पतालका निर्देशक डा. चक्रराज पाण्डे सम्मानित हुँदैछन् । त्यस्तै काठमाडौं मोडल अस्पतालका…
नयाँ दिल्ली ।भारतको केन्द्रीय सरकारले देशभरी विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको मन्त्रीहरुले जानकारी दिएका छन् । निर्णयका बारेमा बैठकपछि पत्रकारहरुलाई जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले नागरिकको स्वास्थ्य हितलाई ध्यानमा राखेर विद्युतीय चुरोट प्रतिवन्धको प्रस्ताव पारित गरिएको बताए । “केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ, यसको अर्थ विद्युतीय चुरोट उत्पादन, किनबेच, ओसारपसार, भण्डारण र विज्ञापन गर्न नपाउने पनि हो,” उनले भने । संयुक्त राज्य अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै अर्थमन्त्री सीतारमणले सन् २०११ र २०१५ देखि २०१६ सम्ममा विद्युतीय चुरोट प्रयोगकर्ताको सङ््ख्या ९०० प्रतिशतले वृद्धि भएको बताए । विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध निर्देशिका २०१९ मा विद्युतीय चुरोट प्रयोग गरेमा के के कारबाही हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय चुरोट प्रयोग गरेको पहिलो पटक भेटिएकालाई एक प्रकारको र एक पटक कारबाही भइसकेर फेरी पनि प्रयोग गरेको भेटिएमा अझ कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको…
बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ६ वर्षदेखि एन्जाइटीसँग लड्दै
सुखी सम्पन्न बन्ने डौड र व्यस्त जीवनशैलीका कारण मानिसलाई चिन्ता अर्थात एन्जाइटी हुनु सामान्य कुरा हो । समय परिवर्तनशिल छ । म्बन्धमा विश्वास नहुने, अरु भन्दा बढि सम्पन्न हुने चाहाना, असुरक्षित महशुस गर्ने आदि विविध कारणले मानिसलाई दिनप्रतिदिन सताइरहेको छ । यसले एन्जाइटीको समस्या बढाइरहेको छ । आममानिसमात्र होइन् बलिउडका स्टारहरू पनि एन्जाइटीको शिकार हुन थालेका छन् । यतिबेला एक्शन थ्रिलर चलचित्र ‘साहो’ र ‘छिचोरे’ बाट चर्चा बटुलिरहेकी बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर विगत ६ वर्ष देखि एन्जाइटीबाट शिकार भइरहेको खुलासा भएको छ । श्रद्धाले हालसालै एक अन्तरवार्तामा आफुलाई एन्जाइटीको समस्या भएको बताएकी छिन् । श्रद्धाका अनुसार उनले चलचित्र ‘आशिकी २’ गरिसकेपछि एन्जाइटीबाट ग्रसित भएको बताएकी छिन् । एन्जाइटीको बारेमा उनले भावुक हुँदै भनेकी छिन् –‘मलाई एन्जाइटी भएको लामो समयसम्म थाहा नै भएन । यसबारेमा आफुलाई केहि ज्ञान थिएन ।’ उनले भनिन् –‘जब आशिकी २ फिल्म गरेँ त्यसपछि एन्जाइटीको लक्षणहरु देखिन थाल्यो ।’ शरीरमा अजिव लाग्ने दुःखाइ महशुस हुन्थ्यो । धेरै अस्पतालमा…